क्यावात ! ओली सरकार : समयमै सकियो विमानस्थलको धावनमार्ग मर्मतको चुनौतीपूर्ण काम « Janata Times
क्यावात ! ओली सरकार : समयमै सकियो विमानस्थलको धावनमार्ग मर्मतको चुनौतीपूर्ण काम
सरकारको सार्थक प्रयास तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयंले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको जिम्मेवारीसहित विशेष चासो तथा राष्ट्रिय आवश्यकताले विमानस्थल मर्मतको काम सकिएको छ
रमेश लम्साल, सिबी अधिकारी/काठमाडौं
नेपालमा तोकिएको समयमै काम सम्पन्न नहुने रोग नयाँ होइन । जतिसुकै ठूला परियोजना पनि विभिन्न बहानामा पर सार्ने, समय लगाउने र लागत बढाउने प्रवृत्तिले विकास निर्माणका लागि बाधक बन्दै आएको छ । गर्नुपर्ने निकायले काम नगर्ने र सरकारले कामै गरेन भन्ने आलोचना सहनुपर्ने बाध्यता पनि उत्तिकै व्याप्त छ । तर त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थलको कामले भने दृढ अठोट भए समयमै जतिसुकै चुनौतीपुर्ण काम पनि संभव हुन्छ भन्ने गतिलो उदाहरण दिएको छ ।
जिम्मेवार निकायले इमान्दार भएर प्रयास गर्यो भने कठिनभन्दा कठिन काम पनि तोकिएको समयमा पूरा हुन सक्छ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ, त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको धावनमार्ग मर्मत कार्यले । सरकारको सार्थक प्रयास तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयंले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको जिम्मेवारीसहित विशेष चासो तथा राष्ट्रिय आवश्यकताले विमानस्थल मर्मतको काम सकिएको छ ।
हेलिकोप्टर दुर्घटनामा निधन हुनुभएका तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको एउटा सपनासमेत पूरा भएको छ । सरकारी निकायले ध्यान नदिँदा ठूला आयोजनामा रुग्ण बनिरहेका छन् । निर्माण व्यवसायीले पनि समय बढाउन पाए अनेक फाइदा हुन्छ भन्ने लालसा राख्ने गरेका छन् । निर्माणाधीन ठूला आयोजनाको हविगतले यही भन्छ र तथा तथ्य तथ्याङ्कले पनि त्यही देखाउँछ तर विमानस्थल मर्मतको काममा भने निराशाका कुरा सुन्नु परेन । एकाध दिन निर्माण सामग्रीको आयातमा समस्या देखिए पनि दृढ इच्छाशक्ति, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सचेत पहल तथा निर्माण व्यवसायीको मिहिनेतले काम तोकिएको समय अर्थात् ९० दिनमा नै पूरा भयो ।
नेपालको परिचय अन्तर्रा्ष्ट्रियजगत्मा स्थापित गर्ने एक मात्र विमानस्थल धावनमार्गको स्तरोन्नति गर्ने काम निर्धा्रित समयमै सकिएको छ । विमानस्थलको मर्मतको काम सकिएपछि सोमबारदेखि नै २१ घण्टा सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको विमानस्थलले जनाएको छ । मर्मतको काम शुरु हुँदा निर्माण सामग्री उपलब्ध होला कि नहोला भन्ने चिन्ता पनि उत्तिकै थियो । निर्माण व्यवसायीले जटिल मानिएको सो काम पूरा गर्ला त भन्ने आशङ्का पनि त्यत्तिकै थियो । एक दिन पनि विमान उडान र अवतरण बन्द गर्ने अवस्था पनि थिएन । देशको एक मात्र अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थल हुनुको पीडाका कारण पनि उडान र अवतरण रोकेर काम गर्ने स्थिति सरकारसँग पक्कै पनि थिएन । न त कुनै विकल्प नै थियो ।
मुलुकको एक मात्र अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थलको धावनमार्गको पिच पटक–पटक उप्किँदा जहाज उडान र अवतरणमा समस्या पर्दै आएको थियो । विशेषगरी वर्षायाममा बढी समस्या देखिन्थ्यो । मालिन्दो र टर्किस एयरलाइन्स दुर्घटनामा पर्दा लामो समयसम्म विमानस्थल बन्द भएको नमीठो उदाहरण सबैको दिमागमा परेकै थियो । चिनियाँ निर्माण कम्पनी चाइना नेशनल एग्रो टेक्नोलोजी इन्टरनेशनल इञ्जिनीयरिङ कर्पोरेशनले सरकारको अपेक्षा र राष्ट्रिय आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर तोकिएको समयमा नै सम्पन्न गरेको छ । बाँकी रहेको छिट्फुट काम भने केही बाँकी रहे पनि त्यसलाई पनि छिट्टै सम्पन्न गरिनेछ ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणअन्तर्गतको हवाई यातायात क्षमता अभिवृद्धि आयोजनाका निर्देशक बाबुराम पोखरेललाई पनि काम नसकिएका कि भन्ने उस्तै चिन्ता थियो । बीचमै केही गडबढी भइहाल्यो भने त मुलुकको प्रतिष्ठामा नै समस्या आउँछ । त्यसको जवाफ कसरी दिने भन्ने छटपटीले पोखरेललाई सताएको थियो । काम कसरी समयमै सम्पन्न गर्नुभयो त भन्ने जिज्ञासामा पोखरेल भन्नुहुन्छ, “हामीले आवश्यकता र बाध्यतालाई केन्द्रमा राख्याँै । निर्माण व्यवसायीलाई सोहीअनुसार आग्रह ग¥यौँ । निर्माण सामग्रीको जोहो पनि त्यसरी नै ग¥यौँ । त्यसले हामीलाई जटिल काम समयमै सक्ने वातावरण बनायो ।”
धावनमार्गमा आवश्यकताअनुसार नयाँ कालोपत्र राखिएको छ । आयोजनाका निर्देशक भन्नहुन्छ, “तीन हजार मिटर लामो धावनमार्गमा आवश्यकताका आधारमा २० देखि २५ सेन्टिमिटर नयाँ पिच हालिएको छ ।” निर्माण कम्पनीले मूल्यअभिवृद्धि करसहित रु चार अर्ब २७ करोडमा धावनमार्ग स्तरोन्नतिको जिम्मा लिएको थियो । मर्मत कार्यको प्राविधिक रेखदेखका लागि परामर्शदाता कोरियन कम्पनी योसिन इञ्जिनीयरिङ कर्पोरेशन कोरियाले जिम्मा लिएको थियो । धावनमार्ग मर्मतको काम कोटेश्वरतर्फको ‘जिरो टू’देखि शुरु गरिएको हो । प्राधिकरणका अनुसार एक हजार ६०० मिटरसम्म धावनमार्गमा अत्यन्तै बिग्रिएको थियो ।
विमानस्थल मर्मतमा पहिलो पटक ‘मेलिङ मेशिन’ प्रयोग भएको निर्देशक पोखरेल बताउनुहुन्छ । काम समयमै सकिँदा असाध्यै खुशी देखिनुभएका पोखरेलले भन्नुभयो, “ठूलो काम सम्पन्न भएको छ । बाँकी रहेका केही काम भने क्रमशः अगाडि बढाइनेछ ।” सन् १९७५ मा निर्माण गरिएको विमानस्थल धावनमार्ग यसअघि मर्मत गरेर सञ्चालन गरिँदै आएकामा पहिलोपटक कालोपत्र परिवर्तन गरिएको हो । काठमाडौँ निदाइरहेको बेला हरेक दिन ८० देखि १०० मिटर धावनमार्ग जोतेर त्यसबाट निक्लेको सामग्री फालेर विभिन्न तहमा निर्माण सामग्री राखिन्थ्यो । राति भत्काइएको धावनमार्ग बिहान ८ बजे उडान तथा अवतरणका लागि जस्ताको तस्तै बनाइयो ।
गौचरनबाट शुरु भएको विमानस्थलको ७० वर्षे इतिहासमा निकै उतारचढाव पूर्ण अवस्था पनि व्यहो¥यो । सन् १९७५ मा स्तरीकरण गर्दै धावनमार्गलाई तीन हजार ५० मिटर लम्बाइ र ४५ मिटर चौडाइको बनाएपछि उक्त विमानस्थलमा प्रायः सबै प्रकारका राष्ट्रिय र अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमान उडान र अवतरण गर्न थालिएको थियो । हाल यो विमानस्थलबाट १९ सिट क्षमताका साना देखि बोइङ–७७७ जस्ता ठूला विमान उडान अवतरण हुँदै आएका छन् ।
‘गोरखा भूकम्प’ले अन्य स्थानमा ठूलो क्षति पुर्याए पनि विमानस्थलमा खासै प्रभाव पारेन तर विमानस्थलका जानकार तथा राष्ट्रिय–अन्तर्रा्ष्ट्रिय परामर्शदाताले धावनमार्ग र ट्याक्सी वेका ‘पेभमेन्ट’ उप्काएर नयाँ प्रविधि प्रयोग गरी नयाँ कालोपत्र राखी मर्मत गर्न सुझाएका थिए । गत चैत १८ गतेदेखि शुरु गरिएको धावनमार्ग मर्मत आज राति सम्पन्न हुनेछ । विमानस्थलबाट हाल १०० भन्दा बढी अन्तर्रा्ष्ट्रियसहित दैनिक सरदर ४०० उडान हुने गरेका छन् । धावनमार्ग मर्मतको अवधिमा १५ प्रतिशत मात्रै उडान कटौती गरियो । जुन नगन्य जस्तै हो । धावनमार्गको मर्मतपछि सुरक्षित उडान अवतरणमा सहज हुनाका साथै विमान ‘होल्ड’ हुने समस्याको पनि अन्त्य हुने विश्वास लिइएको छ ।
सरकारले सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्ष घोषणा गरेको र २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यसमेत राखेको सन्दर्भमा विमानस्थल २४सै घण्टा पूर्ण सञ्चालनमा आउनु देशकै लागि पनि सुखद खबर हो । यसले नेपालमा समयमा काम हुँदैन भन्ने आम सोचाइमा समेत परिवर्तन ल्याइदिएको छ । जुन नेपालका अन्य ठूला भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा यही उदाहरण अनुकरण गर्ने हो भने ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को सङ्कल्प पूरा हुन्छ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । रासस